အမြင့်ဆုံးအထွက်နှုန်း 1000 Watt LED သည်အလင်းထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများကိုကြီးထွားစေသည် - အလင်းရောင်
Home > Products > LED Grow Light > Spyder LED Grow Light > Highest Yield 1000 Watt LED Grow Light
ပုံစံ: MODEL S-8 BAR- HP SERIES
အမြင့်ဆုံးအနိမ့်အမြင့် 1000 Watt LED ကြီးထွားမှုအလင်းကို Meanwell drivers မှစွမ်းအားပေးထားပြီး၎င်းသည်အပြည့်အ ၀ ရောင်စဉ်ဖြူ LEDs များနှင့် ၆၆၀nm အနီရောင် diodes များကို အသုံးပြု၍ ၎င်း၏အမြင့်ဆုံး PPFD5* 5ft ပန်းပွင့်အဆင့်တွင်သေချာစေသည်။ အလင်းရလာသည်။ အမြင့်ဆုံးအထွက်နှုန်း 1000 Watt LED ကြီးထွားလာသောအလင်းသည်စိုက်ပျိုးသူများ၊ ဖြန့်ဖြူးသူများအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ ETL, CE နှင့် RoHS စာရင်းတွင်ဖော်ပြထားသည်။ ငါတို့သည်သင်တို့၏စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ကြိုဆိုပါတယ်
2. အမြင့်ဆုံးအထွက်နှုန်း၏ 1000 ကုန်ပစ္စည်း LED ၏ကုန်ပစ္စည်း Parameter (သတ်မှတ်ချက်) အလင်းကြီးထွား
Product name: Highest yield 1000 Watt LED grow light အလင်းဖြန့်ဝေခြင်း: 120°
Model No.: ခြင်္သေ့ -GL960WHS4-08MD-0101 အပူစီမံခန့်ခွဲမှု: Passive
အလင်းအရင်းအမြစ်: LED Function: 0-10V Knob dimming
LED အရေအတွက်: (340W + 16R) * 8 Mounting height: မြတ်သောအထက် 15cm
LED အမှတ်တံဆိပ်: Epistar အိမ်အရောင်: Silver and red
Amperage: 277V @ 3.61A Life time: > နာရီ 50000
LED driver အမှတ်တံဆိပ်:4* 240W Meanwell N. W.: 14 kg
Power factor: >0.9 လက်မှတ်: ETL, cETL, CE, RoHS
PPF efficacy: 2.8 μmol / J ကို Warranty:5နှစ်
PPF: 2800 μmol / s ကို Packing size: 115*28*22cm
၄။ ထုတ်ကုန်အရည်အချင်းအမြင့်ဆုံး၏ 1000 Watt LED သည်အလင်းကိုကြီးထွားစေသည်
အမြင့်ဆုံးအနိမ့်ဆုံးအထွက်နှုန်း 1000 Waratt LED LED မီးပေါ်မှာကြီးထွားမှုအာမခံချက်သည် ၃ နှစ်ဖြစ်သည်။ အာမခံကာလအတွင်းချွတ်ယွင်းသောနမူနာအမှာစာ (၂ ပီစီအောက်) မွာကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်အား ASAP အစားထိုးခြင်းနှင့်အစုလိုက်အပြုံလိုက်ချွတ်ယွင်းမှုများအတွက်သင့်အားထောက်ပံ့ပေးမည်ဖြစ်သည်၊ အစားထိုးထုတ်ကုန်များကိုသင်နောက်တစ်သုတ်တွင်သဘောတူထားသည့်အတိုင်းပို့မည်။
၅။ အမြင့်ဆုံးအထွက်နှုန်းကိုပေးပို့ခြင်း၊ ပို့ခြင်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်း 1000 Watt LED သည်အလင်းကိုတိုးပွားစေသည်
၆။ အမြင့်ဆုံးအထွက်နှုန်း 1000 Watt LED ၏မကြာခဏမေးလေ့ရှိတဲ့မေးခွန်းများအလင်းကြီးထွားလာသည်
hot Tags:: အမြင့်ဆုံးအထွက်နှုန်း 1000 Watt LED သည်အလင်းကြီးထွားလာခြင်း၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ လက်ကားရောင်းဝယ်ခြင်း၊ စက်ရုံများ၊ စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ခြင်း၊ တရုတ်နိုင်ငံတွင်ထုတ်လုပ်ခြင်း၊